‘मारूनी’हरूले कसैलाई माया गरे भने सबै सीमा पार गर्छन्ः साम्राज्ञी | Badalpari
२०७६ माघ ०६, सोमबार
‘मारूनी’हरूले कसैलाई माया गरे भने सबै सीमा पार गर्छन्ः साम्राज्ञी
setopati सोमबार, भाद्र ३०, २०७६ १५:४९:३३
उस्तै खाले भूमिका गर्न कलाकारहरु पट्यार मान्छन्। अहिले नेपाली सिनेमाकी बोल्ड अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। ‘ड्रिम्स’बाट डेब्यू गरेकी उनलाई त्यसपछि उस्तै खाले भूमिका आए।
केही समय अगाडि उनीसँग गरेको कुराकानीमा उनले ‘उस्तै भूमिकाको प्रस्ताव आउँछन्, त्यसैले आएका मध्येबाट राम्रो लागेको छानेर सिनेमा गर्ने’ बताएकी थिइन्। तर पछिल्लो समय उनले ‘मारूनी’ र ‘रातो टिका निधारमा’ अभिनय गरिन्। जसमध्ये ‘मारूनी’ शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको छ।
यसै सिनेमाको ट्रेलर रिलिज समारोहमा उनले आफू खुसी रहेको बताइन्। खुसीको कारण फरक भूमिकाको सिनेमा पाउनु। उनले त्यतिबेला ‘मारूनी’ र ‘रातो टिका निधारमा’ दुवै आफूले नसोचेको तर चाहेजस्तो सिनेमा भनेर भनिन्। उनै साम्राज्ञीसँग यिनै सिनेमाको विषयमा सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
‘मारूनी’को ट्रेलर रिलिजमा यस पटक सोचेजस्तो सिनेमाको प्रस्ताव आएकोमा खुसी छु भन्नुभयो। यस पटक के छ त्यस्तो?
– ‘ड्रिम्स’ सिनेमापछि त्यस्तै खालको सिनेमाको मात्र प्रस्ताव आयो। मन नपरे पनि आएकामध्ये यो राम्रो हो, मैले काम गर्नुपर्छ भनेर गरें। किनकी काम त गर्नुपर्यो। यो पटक चाहिँ राम्रो आओस् भनेर बसेकी थिएँ। पुनम दिदी (मारूनीकी निर्मात्री) पहिलेदेखि नै मसँग सम्पर्कमा आउन खोजिरहनुभएको थियो। स्क्रिप्ट सुनेँ, हर प्रकारले एकदमै फरक लाग्यो। बोल्दाखेरी बोल्ड सुनिन्छु तर व्यक्तिगत रूपमा म बोल्ड छैन। ‘मारूनी’को यो पात्र बोल्ड छ।
‘ट्रान्सजेन्डर’ को कथा रहेको स्क्रिप्ट सुनेर म डराएकी पनि थिएँ। मैले ‘हुन्न’ भन्न सक्ने भूमिका थिएन। मैले कहिले नसोचेको भूमिका थियो। गर्छु भनेर निर्णय दिन नै मलाई एक डेढ महिना लाग्यो। गरूँ कि नगरूँ भएको थियो। मेकरहरूले राम्रोगरी बनाउन सक्नु होला की नहोला भन्ने डर पनि उस्तै थियो। त्यो किनभने मैले आफ्नो काम राम्रोसँग गरेँ पनि बनाउनेले राम्रो बनाउन सक्नुभएन भने सब खेर जाने डर थियो। धेरै कुरा सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने थियो।
अनि ‘रातो टिका निधारमा’?
– महिला केन्द्रित छ, महिला सशक्तिकरणमा केन्द्रित छ। यो पनि मैले सोचेको भूमिका थिएन, एकदमै बलियो भूमिका। मलाई मानिसले राम्रो गर्‍यो भनेर सरहाना गर्ने भूमिका चाहिएको छ। यसले गाउँघरमा हुने कुरालाई नै प्रस्तुत गर्थ्यो।
‘मारूनी’ पात्रमा छिर्न कति समय लाग्यो, कस्तो तयारी गर्नुपर्‍यो?
– समय लागेन। जब म इण्डियामा पढ्थेँ तब म उनीहरूसँगै हुर्केको हो। अनि मोडलिङ गर्दा पनि त्यही किसिमका साथी थिए। त्यसैले धेरै खोज अनुसन्धान गर्नुपरेन। उनीहरू के हुन्, के सोच्छन? सबै नजिकबाट बुझेको थिएँ। जब उनीहरू कसैलाई माया गर्छन् तब उनीहरूलाई कुनै सीमाको मतलब हुँदैन। उनीहरू सबै सीमा पार गर्छन्। मलाई उनीहरूको वास्तविकता थाहा थियो, त्यसैले गार्हो भएन।
‘मारूनी’ गर्छु भन्न एक-डेढ महिना लाग्यो भन्नुको कारण चाहिँ के हो त? के कुराले दुई महिना लाग्यो?
– गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने थियो। त्यस्तै कलाकारले मात्र राम्रो गरेर हुँदैन, बनाउने मान्छे पनि राम्रो हुनुपर्छ। सिनेमालाई अभिनयले मात्र धान्न सक्दैन, सबै कुरा चाहिन्छ। त्यो कुरा यसका मेकरसँग छ की छैन भनेर सोच्दा समय लागेको हो। अन्तमा ‘अँ साम्राज्ञीको अभिनय राम्रो थियो तर सिनेमा पट्यारलाग्दो थियो’ भन्दा राम्रो सुनिँदैन। फेरि त्यो त सिनेमा हुँदैन। पुनमजीलाई भेटेँ। उहाँले यो मेरो तेश्रो सिनेमा हो केही परिवर्तन गर्न चाहन्छु। पहिलो सिनेमा रहरमा गरेँ, दोश्रो पनि त्यस्तै भयो भन्नुभयो। उहाँको जोश देखेर हुन्छ भने।
यो सिनेमाको के कुरा दर्शकलाई मनपर्ला?
– हालका हाम्रा नेपाली सिनेमाको शैली हेर्नुभयो भने कमेडीमा धेरै छ। यसमा लागेका धेरै कलाकार र निर्देशक फेल हुनुभइसकेको छ। उहाँहरूको कमेडी सिनेमा चल्छ भन्ने भ्रम टुटिसकेको छ। तर हामीले ‘ट्रेण्ड’ नपछ्याई सिनेमाको सोच र बनाउने तरिका राम्रो छ बने दर्शकलाई मनपर्छ, चल्छ भनेर हामी चलेको भन्दा अर्को गर्ने खतरा मोल्यौं। मानिसहरूले त्यो मनपराएका छन्। उहाँहरू सिनेमालाई लिएर उत्साहित हुनुहुन्छ र म आफै पनि धेरै उत्साहित छु।
अनि ‘रातो टिका निधारमा’को भूमिका गर्न कतिको सजिलो गार्हो भयो?
-सजिलो भयो, किन भने म गाउँमै जन्मेको हो। म वीरगन्जको गाउँमा जन्मेको हो, त्यहाँ हाम्रो फार्म हाउस थियो। हाम्रो खेतीपाती, माछा पालन, पाउरोटी उद्योग, डेरी फार्म सबै कुरा थियो। सिनेमाले त त्यो सम्झनाहरू फेरि ताजा गराइदिएको अनुभव भयो। एकदमै रमाइलो भयो। सुटिङमासमेत मैले म यस्तो गर्थे भनेर मेरा कुराहरू अरूलाई सुनाउँथे। हाम्रो को-एक्टरहरू कुखुरा फार्ममा गनायो भन्दै जान घिनाउँदा म चाहिँ खेलिरहेको हुन्थे।
आगामी सिनेमाहरूमा अब आफूले खोज्ने परिवर्तन के हो?
– थप परिपक्व भूमिका। अहिले पनि जब म कुनै सिनेमा हेर्छु र ती सिनेमाका कुनै कुरामा आफूलाई पाउँछु ती मेरा मस्तिष्कमा बसिराख्छन्। म मेरा दर्शकलाई पनि मेरा सिनेमाले त्यही गरून् भन्ने चाहन्छु। सिनेमाले मनोरञ्जन दिनुपर्छ, त्यो जीवन भन्दा केही भव्य हुन्छ, हुनुपर्छ भनिन्छ। त्यो मलाई पनि मनपर्छ। तर त्यसका अलावा त्यसमा केही यस्ता ठाँऊहरू बनाउनुपर्छ जहाँ दर्शकले आफू र आफ्नोलाई पनि देखून या पाऊन्। मलाई त्यो पाइयोस् जस्तो लाग्छ।
यी दुई सिनेमामा कुन सिनेमालाई कति-कति नम्बर दिनुहुन्छ?
– ‘मारूनी’लाई १० मा ७-८ नम्बर दिन्छु। ‘रातो टिका निधारमा’ फरक सिनेमा हो। यसलाई ७ दिन्छु।
हिरोले नयाँनयाँ अभिनेतासँग काम गरेको देखिन्छ। हिरोइनको मामिलामा साम्राज्ञीसँग त्यस्तै भइरहेको छ। यो चाहेर भइरहेको छ की संयोग हो?
– स्क्रिप्ट मनपर्‍यो भने मलाई यति पारिश्रमिक चाहियो भन्नेसम्म मैले निर्णय गर्छु, को कोस्टार हुनेमा मेरो कहिल्यै केही रिजर्भेसन रहेन। संयोग हो।
(सबै तस्वीरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी)
केन्द्र सरकारले कानून नबनाउँदा काम गर्न समस्या भयो : मुख्यमन्त्री पोखरेल
‘किनकी बाउहरू स्वार्थी हुन्छन्…’- दयाहाङ राई
‘मीमांसा’ मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ, अलि फरक छ- प्रविण खतिवडा
औद्योगिक शान्ति नेपाल म्यूजिक अवार्ड सम्पन्न
पोखरा लक्ष्मी काण्ड सासु रुदै मिडियामा, लक्ष्मीलाई भगाउनेको पर्दाफास, कोही नहुँदा कोठामा आउने केटा को थिए रु
नेपालीले हेर्नुपर्ने पुर्बेली स्वादको “फालेलुङ्ग मुनी” भिडियो सहित
गीतकार लोकराज अधिकारीको ‘टाला टुली बटुली’ सार्वजनिक
गायिका धनकुमारी थापा सरुलाई सर्वोकृष्ट लोकदोहोरी गायिकाको अवार्ड
गायिका सिता थापाको आवाजमा ”स्याङजाली माया ” भिडियो सहित